ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလမ်းညွှန်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလမ်းညွှန်ယာဉ် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwanသည်တဦးဖြစ်ခဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလမ်းညွှန်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း။ ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရည်မှန်းကြသည်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များ '' ကို 100% ယုံကြည်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ "ပါဝင်ခဲ့ကြသူအားလုံးသည်န်ထမ်းများ, အရည်အသွေးမြင့်မား, ဖောက်သည် '' စိတ်ကျေနပ်မှု" ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မူဝါဒထွက်ဆောင်သွားစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အစိတ်ဝင်စားဖောက်သည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များသည်ငါတို့ homepage တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ။ သင်သည်အတိုးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်သာလွန်သောအရည်အသွေးမြင့်မားပူဇော်ပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာသင်တို့နှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးရှိလိုရှိ၏။
ကျွန်တော်တို့သည်တီထွင်တိုးမြှင့်ရန်နှင့်တိုးမြှင့်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ flexibility နဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအားကောင်းလာစေရန်ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပမှအရင်းမြစ်များပေါင်းစပ်နှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအသစ်နှင့်အဟောင်းဖောက်သည်များကိုဆက်လက်
ပုံစံ - Robin-Deli
ရော်ဘင်-Deli သည်ကျစ်လစ်။ ပေါ့ပါးစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်,အဓိကအားဖြင့်ဖန်မျှင်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်,သို့မှသာလျင်မြန်သောသွက်လက်မှုနှင့်အရှိန်ဖြင့်ထိန်းကျောင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်.၎င်းသည်ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်ရှိအာရုံခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်,လူပြည့်နေသောနေရာ၌လည်ပတ်ရန်အလွန်အန္တရာယ်ကင်းစေသည်.
၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်,ရော်ဘင်အတွက်အများဆုံးဝန်-Deli သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၃၀ ကီလိုဂရမ်သာရှိသည်,ဒါပေမယ့်လှည့်နိုင်တယ်/maneuver 360 သည်၎င်း၏နေရာ၌ရှိသည်,ကျဉ်းကျဉ်းသို့မဟုတ်လူစည်ကားနေရာများအတွက် operating များအတွက်သင့်လျော်သောအောင်.၎င်းကိုမတူညီသောအထပ်များသို့ရောက်ရန်အဆောက်အအုံများရှိဓာတ်လှေကားများနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်.လီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့်အတူ,ရော်ဘင်-အသင့်စားဆိုင်သည်3အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်-၄ နာရီမဟုတ်-အားသွင်းရန်မလိုအပ်ဘဲရပ်တန့်ပါ.
ယာဉ်အလေးချိန်.: ±၅၀ ကီလိုဂရမ်
ကြာမြင့်ချိန်:၃၀ ဝန်းကျင်-ငွေပေးချေပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၆၀ အလုပ်လုပ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/autonomous-guided-vehicle.html
အကောင်းဆုံး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလမ်းညွှန်ယာဉ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလမ်းညွှန်ယာဉ် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ